E toro Chineke maka ihe ndị dị ebube o kere
Ụwa ga-adị ruo mgbe ebighị ebi (5)
E kere mmanya na nri maka mmadụ (15)
“Ọrụ ị rụrụ dị nnọọ ọtụtụ” (24)
“I mee ka ha kwụsị iku ume, ha na-anwụ” (29)
104 Ka m* too Jehova.+ Jehova Chineke m, ị bụ nnọọ onye ukwu.+ I yi ebube na ùgwù ka uwe.+ 2 I ji ìhè kpuchie onwe gị+ ka ákwà. Ị na-agbasa eluigwe ka ákwà ụlọikwuu.+ 3 Ọ bụ na mmiri dị n’elu* ka ọ rụkwasịrị ụlọ ya ndị dị n’elu.+ Ọ na-eji ígwé ojii emere ụgbọ ịnyịnya.+ Ọ na-agagharị n’elu ifufe.+ 4 Ọ na-eme ka ndị mmụọ ozi ya sie ike,Na-emekwa ka ndị ozi ya bụrụ ọkụ na-erechapụ ihe.+ 5 Ọ tọsiri ntọala ụwa ike.+ A gaghị ebupụli ya ebupụ* ruo mgbe niile ebighị ebi.+ 6 I ji oké osimiri kpuchie ya ka ákwà.+ Mmiri tochiri ugwu dị iche iche. 7 Ị bara mba, ha asọghachi azụ.+ Mgbe ha nụrụ ụda égbè eluigwe gị, ha tụrụ ụjọ sọghachi azụ 8 N’ebe ị tọrọ ntọala ka ha dịrị. Ugwu wee dịrị,+ ndagwurugwu adịrịkwa. 9 Ị kpaara ha ókè ebe ha na-agaghị agafe,+Ka a ghara inwe mgbe ha ga-etochi ụwa ọzọ. 10 Ọ na-eme ka iyi dịrị na ndagwurugwu. Ha na-asọ n’agbata ugwu dị iche iche. 11 Ọ bụ mmiri si na ha ka anụ ọhịa na-aṅụ. Jakị ọhịa na-aṅụ ya ma mmiri gụwa ha. 12 Nnụnụ na-akpa akwụ́ n’elu osisi ndị dị n’akụkụ mmiri ndị ahụ. Ha na-anọ n’alaka ha akwụkwọ juru na-ebe ubé. 13 Ọ na-esi n’ụlọ ya ndị dị n’elu agba ugwu dị iche iche mmiri.+ Ihe ndị ị na-emepụta na-ezuru ụwa.+ 14 Ọ na-eme ka ahịhịa na-epuru anụmanụ,Na-enyekwa ndị mmadụ ihe ha ga-akụ,+Ka ha wee si n’ala na-enweta ihe oriri 15 Na mmanya nke na-eme ka obi tọọ mmadụ ụtọ,+Mmanụ nke na-eme ka ihu mmadụ na-egbuke egbuke,Nakwa nri nke na-eme ka mmadụ nwee obi ụtọ.+ 16 Osisi Jehova kụrụ na-enweta mmiri na-ezuru ya,Ya bụ, osisi sida ndị dị na Lebanọn, 17 Bụ́ ebe nnụnụ na-akpa akwụ́ ha. Ụgbala ọcha*+ na-ebi n’osisi junipa. 18 Ewu ọhịa na-anọ n’ugwu ndị dị elu.+ Ewi nkume na-ezo ná nnukwu nkume.+ 19 O kere ọnwa ka e jiri ya na-amata oge dị iche iche. Anyanwụ ma oge o kwesịrị ịda.+ 20 Ị na-eme ka ọchịchịrị gbaa, chi ejie.+ Ọ bụ mgbe ahụ ka anụ ọhịa niile na-akpagharị. 21 Ọdụm na-agbọ ụja mgbe ha na-achọ anụ ha ga-eri.+ Ha na-achọ nri Chineke ga-enye ha.+ 22 Mgbe anyanwụ pụtara,Ha na-alaghachi gaa makpuru n’ebe ha na-ebi. 23 Mmadụ na-apụ gawa ọrụ ya,Ọ na-arụgidekwa ọrụ ruo mgbede. 24 Jehova, ọrụ ị rụrụ dị nnọọ ọtụtụ.+ I ji amamihe rụọ ha niile.+ Ihe ndị i kere eke juru n’ụwa. 25 Oké osimiri buru ezigbo ibu ma saa mbara. Imirikitiimi ihe ndị dị ndu, ma ndị ukwu ma ndị nta, juru n’ime ha.+ 26 Ụgbọ mmiri na-aga na ha. Nnukwu anụ mmiri,*+ nke i kere ka ọ na-egwuri egwu n’ime ha, na-agakwa na ha. 27 Ha niile na-eche gịKa i nye ha ihe ha ga-eri n’oge kwesịrị ekwesị.+ 28 Ihe ị na-enye ha ka ha na-eri.+ Ọ bụrụ na ị saghee aka gị, ha na-enweta ihe ọma na-ezuru ha.+ 29 Ọ bụrụ na i wepụ ihu gị, obi anaghị ezu ha ike. Ọ bụrụ na i mee ka ha kwụsị iku ume,* ha na-anwụ laghachi n’ájá.+ 30 Ọ bụrụ na i zipụ mmụọ nsọ gị, a na-eke ha.+ Ị na-emekwa ka ala dị ọhụrụ. 31 Jehova ga na-adị ebube ruo mgbe ebighị ebi. Jehova ga-aṅụrị ọṅụ n’ihi ọrụ ya.+ 32 O lee ụwa anya, ụwa amaa jijiji. O metụ ugwu dị iche iche aka, ha akwụọ anwụrụ ọkụ.+ 33 M ga-abụku Jehova abụ+ n’oge niile m dị ndụ. M ga-abụku Chineke m abụ otuto n’oge niile m dị ndụ.+ 34 Ka ihe m na-eche n’echiche dị ya mma.* M ga na-aṅụrị ọṅụ n’ihi Jehova. 35 A ga-ekpochapụ ndị mmehie n’ụwa. Ndị ajọ omume agaghịzi anọ.+ Ka m* too Jehova. Toonụ Jaa!*
^ Na Hibru, “n’ime mmiri.”
^ Ma ọ bụ “A gaghị eme ka ọ maa jijiji.”
^ Na Hibru, “Levayatan.” Gụọ Nkọwa Okwu.
^ Ma ọ bụ “i wepụ mmụọ ha.”
^ O nwere ike ịbụ, “Ka ihe m na-atụgharị n’uche banyere ya dị ya ụtọ.”